थाहा नगरपालिकामा खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन, अध्यक्षमा स्याङ्तान - Everest Dainik - News from Nepal
थाहा नगरपालिकामा खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन, अध्यक्षमा स्याङ्तान
मकवानपुर, फागुन २८ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ७ मा मझुवा लिफ्टिङ खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। उपभोक्ता समिति गठनभएसँगै लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव खेपिरहेका वडाबासीले अब भने खानेपानी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार, थाहा नगरपालिका र च्वाइस नेपालको संयुक्त ४ करोड ४७ लाख बजेटसहित मझुवा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सुरु हुन लागेको हो।
याे पनि पढ्नुस राप्रपाका कमल थापा दुई हजार मतले पछि परे
मंगलबार नगर प्रमुख लबसेर बिस्टको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको एक कार्यक्रम ले ११ सदस्यीय उपभोक्ता समिती गठन गरेको छ। जसमा दिपेन्द्र थिङ अध्यक्ष , बलबहादुर गोङ्बा सचीव, भरत कार्की उपाध्यक्ष र लक्ष्मि गोले कोषाध्क्षमा चयन भएका छन् ।
उक्त आयोजनाले थाहानगरपालिका वडा नं. ७ को चिसापानी, छाप, महादेवखर्क र देउखेलका गरी ३८० घरधुरी लाभान्वित हुने वडाका कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक थिङले बताए । यस्तै, मंगलबार कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख बिस्टले लामो समयको प्रतीक्षापछि यहाँको जनताले अब खानेपानी पाउने बताए ।
याे पनि पढ्नुस मकवानपुरको कुन्छाल गाउँलाई पर्यटन गन्तब्य बनाउने प्रतिबद्धता, ‘घरमै बसेर डलर कमाउने अवसर !
ट्याग्स: makawanpur, Thanagarpalika